शिक्षा सेवा प्राविधिक सहायक अन्तरवार्ता – DeviRam Acharya
Employee on Sofa. Job Interview Process in Office. People Wait in Corridor. Manager Boss in Formal Suit Talk to Male Candidate Character. Coworking Space. Cartoon Flat Vector Illustration
By Deviram Acharya	 प्रकाशित मिति: Aug 3, 2021
विभिन्न प्रकारका जागिरका लागि अन्तरवार्ता लिने प्रचलन रहेको छ । यो आलेख खासगरी लोक सेवा आयोगले हालैमात्र नतिजा प्रकाशन गरेको शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक पदको अन्तरवार्ताका लागि तयार गरिएको छ । म आलेख अन्तर्वार्ता कसरी दिने भन्ने विज्ञ र जान्ने भन्दा पनि भन्दा पनि आफैले अन्तर्वार्ता दिदाका वखत गरेका अनुभव, अन्तरवार्तामा सहभागी भएका साथीहरूको अनुभव र आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख भएका बुँदाका आधारमा तयार गर्दैछु । लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा नाम निस्किएका धेरै साथीहरुले फोन र फेसबुक म्यासेन्जरबाट अन्तर्वार्ता तयारीमा के गर्ने भनेर सोधिरहनु भएको हुनाले वहाँहरुका लागि यो आलेख तयार पारिएको हो । यो आलेखमा अन्तर्वार्ताको तयारी कसरी गर्ने र अन्तर्वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने सम्बन्धमा केही सामान्य बुझाई र अनुभव प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा प्रस्तुत कुराहरू सधै सबै सन्दर्भमा लागु नहुन पनि सक्छन् र यी नै सबै अन्तिम सत्य पनि होइनन् ।
धेरैजनाले त कुनै न कुनै अन्तर्वार्ता दिनुभएकै होला । नयाँ त केही हुदैँन, उस्तै हो । सहज र स्वभाविक हुन्छ ।
अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत हुँदा सकेसम्म आफु प्राकृतिक रुपमा जे जस्तो हो, त्यही रुपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक हुन्छ । सधै जस्तो पोसाक लगाइन्छ, त्यस्तै लगाउने, सधैँ जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै बोल्ने । कृत्रिमता र नक्कल गर्नु हुदैँन ।
अन्तर्वार्तामा जाने भनेर नयाँ कपडा किन्ने, सिलाउने नर्गनुस । त्यसो भनेर पुरानो झुत्रो लगाउने भन्ने पनि होइन । तपाईँ सँधै अथवा प्रायजसो जस्तो कपडा लगाउनु हुन्छ त्यस्तै लगाउनुस । सेन्ट नर्छनुस । कपाल नछोट्याउनुस । अर्थात नयाँ कुरा नर्गनुस । तपाईँ सधै जस्तो हो त्यस्तै प्रस्तुत हुनु राम्रो हुन्छ । सधैँ नै सेन्ट छरेर नै हिड्ने गर्नुभएको छ भने आयोगको अन्तरवार्तामा जानैका लागि भनेर नछर्नु पनि पर्दैन तर सेन्टको गुणस्तरले प्रभाव पार्ला । कपाल मिलाउने वा मेहन्दी लगाउने नगरेको राम्रो । अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाई छ : simple is effective.
कतिपयले अन्तर्वार्तामा बोल्दा कृत्रिमता ल्याउन खोज्ने र बोलि बङ्गाउने गरेको पनि पाइन्छ । यो एकदमै गलत हो । तपाईँ आफु जस्तो हो, त्यस्तै प्रस्तुत गर्नुस । सकेसम्म नम्र भएर बोल्नुस । विस्तारै तर सुनिने गरी बोल्नुस । प्रश्नकर्ताले जे जति प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नुस, जानेको छु भनेर धेरै भन्नु पर्दैन् । जानेको विषयमा धेरै बोल्दा अप्ठ्यारो भएको अनुभव धेरैजनाको रहेको छ ।
विषयवस्तु र समयसामयिक सन्दर्भहरु तयारी गर्नुस । धेरै आत्तिनु र डराउनु आवश्यक नै छैन । तपाईँले सधै भेटेका कुरा गरेका जस्तै मानिसहरूले नै तपाईँको अन्तरवार्ता लिने हो । कोही अनौठो मानिस नहुने भएकाले आत्तिनु पर्दैन् ।
अन्तर्वार्ता कक्षमा सामान्य शिष्टाचारसँगै सकेसम्म हँसिलो मुद्रामा प्रस्तुत भएको राम्रो । केहीगरी हँसिलो मुद्रा भएन, केही विग्रिदैन तर जर्वजस्ती हास्न पर्दैन ।
परिचय दिदा आफ्नो पूरा परिचय दिनुस । कतिपयले परिचयमै पनि केही कुरा ढाट्ने गर्न खोजेको पाइन्छ । यसले पनि समस्या हुन्छ । उदाहरणको लागि तपाईँ स्कुल पढाउनु हुन्छ । परिचयमा पढ्दै छु, जागिर छैन भन्नु भयो र पछि विषयको कुरा हुँदै जादा मैले पढाउँदा यसो गर्छु भन्न पुगिन्छ । किनकी परिचय ढाँटेको कुरा पछि सम्झिदैन, त्यसैले अन्तर्वार्तामा सकेसम्म ढाट्ने कामै नगर्नुस् । एउटा कुरा ढाट्नु भयो भने त्यसलाई पुष्टी गर्न अरु १० कुरा ढाट्नुपर्छ ।
मेरै आफ्नै अनुभव छ । पहिलो पटक अन्तर्वार्ता दिदा बि एड पढ्दै छु भने । प्रश्नकर्ताले मलाई माइक्रो टिचिङ्गको वारेमा सोध्नुभयो । त्यति राम्रोसँग भन्न सकिन । अनि दोस्रो अन्तर्वार्तामा बि एड पढ्दै गरेको नभन्ने योजना गरेर गए र भनिन् तर फेरी अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधियो, बि एड पढ्दै छु नभनि सुखै भएन ।
तपाईँ कुनै एउटा क्षेत्रमा जागिरे हुनुहोला । शिक्षण गर्नुहुन्छ होला । क्याम्पस पढाउनुहुन्छ होला । अथवा कुनै एउटा जाँगिर छोडेर अर्कोमा आउने होला । स्थानीयको छोडेर संघमा पनि आउने होला वा अरु पनि । तपाईँलाई किन त्यो जागिर छोडेर यता भन्ने प्रश्न प्राय सोध्ने गरेको पाइन्छ । र ध्यान दिनुस एउटै प्रश्न सबैलाई सोधिन्न । वास्तविकता जे हो त्यही भन्नुस । आदर्शवान हुनु पर्दैन ।
म देशको शिक्षा सुधार गर्न, राष्ट्र सेवा गर्न भन्नेजस्ता आदर्शका कुरा नगर्नुस् । जे हो त्यही भन्नुस । अस्थायी, पेसागत सुरक्षाका लागि स्थायी जागिरका लागि यता जाँच दिए । म अहिले शिक्षण गर्छु तर मलाई निजामती सेवामा जागिर खाने रहर, चाहनाले गर्दा यता आए । माथिल्लो पदका लागि । अवसरका लागि । वृत्ति विकासका लागि । आदि ।
शिक्षण पेसा खतम छ पनि नभन्नुस र सरकारी निजामती सेवा सारै उत्कृष्ट पनि नभन्नुस । विद्यालय घरपायक भएन, विद्यालयमा सरुवा अलिक कठिन, यता भए घरपायक होला भनेर हो । वृत्तिविकासका अवसर बढी छन् । जे हो त्यही भन्नुस । आदर्शबान नबन्नुस । गरिरहेको पेसाको नकारात्मक मात्र र आउन लागेको खुब राम्रो नभन्नुस । सबै पेसामा केही गुण दोष हुन्छन् । यो प्रश्न धेरैजसो सोधिएको हुदैँन के भन्ने होला भन्ने लागिरहेको हुन्छ ।
कहिलेकाँही परिचयबाटै पनि प्रश्न शुरु हुन सक्छ । तपाईँ अन्तरवार्ता दिन जादाको बाटो, दुरी जस्ता सामान्य विषय पनि सोधिन सक्छ । सामान्य जानकारी राख्नुस् । अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थानको वारेमा पहिले नै निश्चित भएको हुनुपर्छ । अन्तर्वार्ता दिन जाँदा लैजाने सामाग्रीको तयारी गर्नुस् । समय छ भनेर भन्दा सङ्कलन गरेर राखेको राम्रो ।
अन्तर्वार्तामा बसेकाहरुले पालैपालो प्रश्न सोध्छन् तर तपाईँले उत्तर दिदा प्रश्न सोध्नेलाई मात्र नहेरी सबैलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ । तर प्रश्न सोध्नेलाई धेरै हेरिएला । आफ्ना व्यक्तिगत कुरा अनावश्यक रुपमा नभन्नुस । मलाई पास गराइदिनुस, मेरो समस्या छ भन्नेजस्ता कुरै नगर्नुस । सोधिएका प्रश्नको आवश्यकभन्दा बढी व्याख्या पनि नगर्नुस् ।
कुर्सीमा बसेर शरीर तन्काउने, हल्लीने नगर्नुस् । नाक कोट्याउने, कपाल कन्याउने, दातँ कोट्याउने काम पनि नर्गनुस् । हाउभाउ देखाउनु पर्दैन् । फेरी भने simple is effective.
अन्तर्वार्ता कक्षमा तपाइँका लागि बस्ने स्थान हुन्छ । सामान्यतया: बस्ने ठाँउ देखाएर बस्नुस भनिन्छ । यदि त्यसो भनिएन र परीक्षण गर्न खोजियो भने पनि नआतिएर तपाईँ आँफै म बसौँ भनेर अनुमति लिएर बस्नुपर्छ । बस्दा सजिलो हुने गरी, हात नबाधि, खुट्टा नखुम्च्याइ अथवा सहज हुने तरिकाले बस्नुपर्छ । अन्तर्वार्ता दिने बेला यसरी बस्छु भनेर तयारी गर्नुपर्दैन । त्यसरी जानु भयो भने, प्रश्नको उत्तर दिदा पनि तपाईँको ध्यान बसेको मिलेको छ छैन भन्नेतर्फ जाने हुँदा सकेसम्म प्राकृतिक बन्नुस । कृत्रिम भन्ने केही पनि नर्गनुस । नडराउनुस, नहडबडाउनुस । केही गरी तपाई तनावमा आउनुभयो, डराउनुभयो भने पनि अन्तरवार्ताकारहरूले सहज वातावरण तयार गर्छन् ।
अन्तरवार्तामा सामान्यतया पहिले सोधेको प्रश्नहरु दोहोरिदैनन । दोहोरिए पनि आफुले जे जानेको छ, त्यही भन्ने हो । नजान्दा ठूलो गल्ती हुँदेन तर गल्ति उत्तर भन्दा नकारात्मक नतिजा आउन सक्ने हुन्छ ।
आफूले विश्वविद्यालयमा पढेको विषयवस्तुमा पनि सामान्य तयारी गर्नुहोस् । कुनै विषयमा तपाईँको धारणा के छ भनेर सोधियो भने एकदमै नकारात्मक वा अन्धभक्त जस्तो सकारात्मक धारणा नराख्नुहोस् । जस्तै नेपालका सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर कमजोर छ, यसका लागि को जिम्मेवार भनेर सोधिएला । कतिपय शिक्षण गरिरहेका तपाईँहरूले राज्य, सरकार र अभिभावक भन्नुहोला । शिक्षण नगरेकाले शिक्षक भन्नुहोला । यस्तो सवालमा सन्तुलित भएर सबै पक्षको भूमिका छ, कसैको बढी होला कसैको कमि तर मेरो विचारमा अथवा मलाई यसको अलि बढी हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ भनेर प्रस्तुत हुन सकिन्छ । तर आफूले कुनै विचार राखिदैछ भने त्यसलाई सहयोग पुग्ने तर्कहरु पनि राख्नु पर्छ । जस्तै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयमा दिइयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोधियो भने संविधानकै आलोचना गरेर नकारात्मक नबन्नुस । ठिकै लाग्छ, वा ठिक छैन मात्र भनेर नपुग्ला किन ठिक लागेको छ वा किन लागेको छैन, २।३ वटा पुष्ट्याइ पनि दिनु आवश्यक हुन्छ ।
लोकसेवा आयोग सञ्चालन निर्देशिकाले अन्तरवार्ता सम्बन्धमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरेको छ ।
प्राविधिक सहायक भनेकै सहायक स्तरको जागिर हो । अर्थात कार्यालयको काममा सहायक भूमिका हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले कार्यालयमा के काम गर्नुपर्छ थाहा छ भनियो भने शिक्षा शाखामा सहायक कर्मचारीको काम हो, त्यो अर्थमा अभिलेख राख्ने, पत्र पठाउने, दर्ता गर्ने । सञ्चारका कामहरु, कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगी भूमिका हो ।
प्रश्न खासगरी विश्लेषणात्मक भन्दा पनि fact (तथ्य) र बुझाइसँग सम्बन्धित सोधिन्छ । कहिलेकाँही तपाईँको योग्यता र अनुभव अनुसार विश्लेषणात्मक प्रश्न पनि सोधिन सक्छ । जाने बुझेको भए भन्नुस, नत्र जबर्जस्त गर्नुपर्दैन ।
तयारी के गर्ने :
तोकिएको पाठ्यक्रम अर्थात प्राविधिक सहायकको पाठयक्रम
शिक्षाको इतिहास, संविधान, सामान्य ज्ञान, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन, निरीक्षण, शिक्षा प्रशासन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जस्ता विषयहरु ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावली (विदा र सेवा सुविधा र आचरण खण्ड), शिक्षा ऐन र नियमावली ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६
विद्यालय संरचना र सामान्य शैक्षिक तथ्याङ्क
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावली सामान्य जानकारी
शिक्षा नीति ३०७६ सामान्य जानकारी
विद्यार्थी मूल्याङ्कन (CAS, summative, formative, achievement test, standardized test)
फाइलिङ, अभिलेख, पत्रव्यवहार, टिप्पणी आदि ।
पाठ्यक्रममा भएका विषयमा बढि जोड दिनुस । अन्य विषयका सवालमा जानेको भए जानेको भन्ने, पढेको सुनेको हो, अहिले भन्न सकिन भन्ने, त्यो पनि नभए, पढेको सुनेको छैन भन्ने । अनुमान नलगाउने । झुटो भन्नुभन्दा जान्दिन भन्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । विश्वविद्यालयमा आफुले पढेको विषयको आधारभूत ज्ञान पनि चाहिएला ।
अन्तर्वार्ता आफूँ जस्तो हो, त्यस्तै देखाउने कला हो । धन्यबाद । deviramac@outlook.com मा इमेल लेख्न, ट्वीटरमा फलो गर्न @achdevi वा फेसबुक पेज Educationplus मा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ ।